Mitombo ny Ambana Famonoantena Eny Anivon’ny Vondrom-Piarahamonina Mahantran’ny Arabo Ahwazi ao Iràna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Septambra 2017 3:07 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, Italiano, English
Miaina taham-pahantràna avobe tsy mahazatra ary tsy fananana asa eny anivon'ireo teratany arabo monina ao aminy ny faritra Ahwaz ao Iràna. Tena nahery setra tokoa ny famonoantena nataon'ireo Arabo Ahwazi tato anatin'ny volana vitsy lasa. Sarinà Arabo mpiasa ao Iràna, natolotry ny Patriotic Arab Democratic Movement ao Ahwaz. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Nanosika ny toedraharaha mampivalaketraka momba ny fahantràna sy ny tsy fananana asa iainan'ny vondrom-piarahamonin'ny Arabo Ahwazi ao Iràna ho fantatry ny rehetra ny fandoroana tena nataonà lehilahy iray nantsoina hoe Jassim Moramazi tamin'ny 27 Aogositra.
Nanambady ary niteraka iray i Moramazi, nonina tany Al-Thawra any amin'ny manodidina an'i Ahwaz atsimo-andrefan'i Iràna. Nampijaly azy ny tebiteby, ny rarintsaina ary ny henatra nateraky ny tsy fahafahany manoatra momba ny fiainany sy ny ankohonany, araka ny nambaran'ireo vondrona mpiaro ny zon'ny Ahwazi miasa ao anatin'ny faritr'i Ahwaz izay naniry ny tsy hitonona anarana.
Lahatsary iray maherihery setra nozaraina tao amin'ny Youtube no voalaza fa nirakitra ireo fotoana taorian'ny nandrehetany ny tenany. Marobe ireo olona niezaka haingana ny hamono ny afo, ary nalefa tany amin'ny hopitalin'i Taleghani ao an-tanànan'i Ahwaz i Moramazi. Nilaza ny loharanom-baovao avy ao an-toerana fa mafy loatra ny fahamaizana nanjo azy ka tsy vitan'ireo mpitsabo ny nikarakara azy. Maty fotoana fohy taorian'izay izy.
Tsy ny azy irery no tranganà famonoantena tamin'ny Aogositra teny anivon'ireo Arabo Ahwazi vitsy an'isa, ary mampitandrina ireo mpikatroka ao an-toerana hoe mitombo be ny isan'ireo lehilahy manapitra ny ainy. Nitatitra ny Ivontoerana Ahwazi Momba ny Zon'Olombelona fa marobe ireo hafa — Hamid Maniat, Ali Hazbawi, Sayed Falah Moussawi, ary Shahab Bani Tamim — nananton-tena nandritra iny volana iny.
Zavatra iray iraisana no zarain'ny tantaran'izy ireny. Fianakavianà lehilahy nahatsapa ho tsy afa-manoatra, tsy afaka miahy ny fianakaviany intsony izy rehetra ireny noho ny filàm-baniny ataon'ny governemanta iraniàna, na ny tsy fahavitàn-dry zareo manana asa hiantohana ny ankohonany.
Miaina fahantràna lalina, tsy fanànana asa ary fanilikilihana ireo Arabo Ahwazi
Sahiran-tsaina noho ny olana ara-toekarena lalina izay manakana ireo teratany Arabo mponina ao aminy tsy hahazo izay filàna fototra ilainy ilay faritra tena ahitàna vondrom-piarahamonina Arabo Ahwazi betsaka indrindra ao Iràna.
Hatramin'ny taonjato teo aloha, faritra iray nahavelona ny tenany tao Iràna ny Arabo Ahwaz, mandra-pàkan'ny mpanjaka Pahlavi azy sy niezahany namàrana ny fahavintenan'ilay foko nanerana an'i Iràna tamin'ny 1925. Ny faritra Ahwaz no tomponandraikitra tamin'ny sasantsasany amin'ireo tany midadasika misy solika sy entona ao Iràna, ary ny sasany amin'ireo tany fambolena mamokatra be ho an'ny indostrian'ny fambolena ao Iràna. Na eo aza ireny loharanon-karena sarobidy ireny, mbola anaty ady mafy foana ny toekaren'ilay faritra, ary zara raha mahita tombony sy mahazo valisoa avy amin'io harena io ireo mponina teratany. Matetika izy ireo no itambesaran'ny aretina tsy misy fitsaboana, ny hanoanana ary ny fihafiana
Mandà tanteraka tsy hanone asa ireo Arabo Ahwazi any amin'ireo indostria momba ny solika sy ny entona ny governemanta iraniàna. Naorin'ny governemanta ihany koa ireo tohodrano marobe mamily ny rano avy any amin'ireo faritra Arabo ho any amin'ireo faritra Persiana toa an'i Isfahan, Yazd, Kerman, ary ireo faritany Qom. Vao mainka nanaratsy fotsiny izao ny toedraharaha mandravarava nateraky ny haintany manjo ilay faritra amin'izao fotoana izao ireny tohodrano ireny, manimba ny indostrian'ny fambolena ao an-toerana, ny jono, ary ny fambolena voanio.
Tafakatra ho 81% ny tahan'ny tsy fananana asa eny anivon'ny tanora. Nour Mohammed Pur, tale jeneralin'ny kaoperativa, ny asa ary ny fiahiana ara-tsosialy ao Iràna, nilaza fa 5% amin'ireo Ahwazi mitady asa ihany no manana faripahaizana fanabeazana fototra, 55% amin'ireo mpitady asa monja no nahavita ny ambaratonga faharoa, ary 45% no manana faripahaizana avy amin'ny anjerimanontolo.
‘Politika ara-drafitra…mikendry izay hamonoana ny fanahin'ny fanoherana manerana ny firenena’
Karim Dohimi, Iraniana Ahwazi mpikatroka mpitaky zo ary monina any Londòna, no nilaza tamin'ny Global Voices hoe ny toedraharaha momba ny “fahantrana lalina, tsy fanànana asa ary ny fanilikilihana ara-poko” no nitarika nankamin'ny “fitomboana be” ny isan'ireo lehilahy tanora Ahwai nirona tamin'ny famonoana tena.
Nolazain'i Dohimi fa tato ho ato no tena niharatsy indrindra ny tsy fanànana asa manokana, noho ny fanafangaroana foko Persiana marobe tonga tao Ahwaz, sy ny fomba manilikilika atao an'ireo Arabo amin'ny fandraisana mpiasa:
Ny safidy manokana ataon'ireo manampahefana tompon'andraikitry ny sampan-draharaha handray ireo hery mpamokatra tsy Arabo dia manakana ireo Arabo Ahwazi eo an-toerana tsy ho afaka hanararaotra ny fahazoana asa amin'ny sehatra rehetra. Io no ampahany amin'ny politika ara-drafitra ataon'ny fitondràna izay mikendry ny hamonoana ny fanahin'ny fanoherana manerana ny firenena any anatin'ireo tanora Arabo, manery azy ireny hlkaroka izay hahavelona azy ivelan'i Ahwaz tanindrazany. Misy ireo olona voatery nanova ny anaram-pianakaviany sy ny fanampiny mba hanafenana ny maha-Arabo Ahwazi azy ireo, satria tsy leferina mihitsy ny anarana Arabo any amin'ireo toerana fiasàna, toy zany koa ny fitenenana na ny fitondràna akanjo Arabo.
Manoloana ireo fepetra terana hozakain'ireo Arabo Ahwazi, misintona lakolosy fanairana ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona, alohan'ny hivadihan'ny zavatra ho vanja milevina. Ho hita eo raha hijoro sy handray izay tandrify azy izao tontolo izao.
Ny antony voalohany mahatonga ny famonoantena dia ny rarintsaina tsy voatsabo. Azo tsaboina tsara ny rarintsaina ary azo sorohana ny famonoantena. Momba ireo olana mitarika ho amin'ny famonoantena sy olana ara-pihetsehampo,afaka mahazo fanampiana avy aminà mpanoro hevitra manokana ety anaty serasera ianao. Tsidiho ny Befrienders.org hahitanao izay fanampiana azonao raisina ety anaty serasera mifanaraka amin'ny firenenao.